Mandray an’i Kristy loharanon’aina
«Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona.» Jao. 1:4.
Mikasika an'i Kristy mihitsy ny nilazan'i Jaona hoe: "Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fahazavana ny olona ". Tsy misaraka ny fiainana sy ny fahazavana, ary raha tsy mahazo fahazavana avy any amin 'ilay Masoandron'ny Fahamarinana isika dia tsy hahazo fiainana ao aminy. Natao ho an'ny fanahy rehetra io fahazavana io ka izay miala aminy dia tratry ny haizina. Hoy i Jesôsy: «Ary Jesôsy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina». Tsy misy fiainana eto amin'ity tany misy antsika ity raha tsy misy fahazavana. Raha toa ka tsy mandefa ny tarany ny masoandro dia ho faty avokoa ny zava-manan'aina rehetra (olombelona, biby, zava-maniry) ka ho tapitra hatreo ny amin'izao tontolo izao. Izany dia maneho fa tsy afaka ny hanana aim-panahy isika raha tsy mitoetra eo ambanin 'ny taratr'ilay Masoandron'ny fahamarinana.
Moa tsy ho vetivety dia ho faty va ny voninkazo maniry ao anaty haizina? Toy izany koa ny aim-panahintsika raha toa ka milomano ao anaty fanahiana sy haizim-pito. — YI, 25 May 1893.
Ny olombelona amin'ny maha-izy azy dia tsy manana fahazavana. Raha misaraka amin'i Kristy isika dia toy ny jiro tsy mirehitra. Tsy misy fahasamihafana amin'ny volana miamboho masoandro. Tsy manana na dia tara-pahazavana iray aza isika entina hiadiana amin'ny haizin'ny tany. Raha mitodika any amin'ilay Masoandrom-pahamarinana anefa isika, rehefa mifandray amin'i Kristy dia afaka manaram-po amin'ny hazavana avy amin'ny fanatrehany masina. — TFMB, t.64.